ကောငျးကငျသိပ္ပံ, ကူညီနေတဲ့စိတ်စွမ်းအင်အရေးအသား, ကူညီနေတဲ့စိတ်စွမ်းအင်အယူဝါဒ, ကူညီနေတဲ့စိတ်စွမ်းအင်အံ့သြစရာ, ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်ကိုလှိမ့်, ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်, ဘုရားသခငျ့ alpha ဗျာဒိတ်တော်နှင့်အိုမီဂါကိုထာဝရအဘ alpha နဲ့အိုမီဂါ၏ကူညီနေတဲ့စိတ်စွမ်းအင်သတင်းစကား, ကြီးစွာသောချမ်းသာပေးနိုင်သော, သမ္မာတရား၏ဝိညာဉ်၏အယူဝါဒ, မု (အခန်း5ကမ္ဘာပျက်) ၏ကျွန်းပေါ်မှာယောဟန်၏ဗျာဒိတ်ရူပါရုံနားလည်, ရာစုနှစ်များစွာနှင့်ရာစုနှစ်များစွာများအတွက်မျှော်လင့်ထားဗျာဒိတ်တော်သည်, မြင်, နှိုင်းယှဉ်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, listen, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကောက်ချက်ဆွဲခြင်းနှင့်လွတ်လပ်စွာမျှဝေ, မူရင်းကျမ်းလိပ်လက်ရေးဖြစ်ကြောင်း, စပိန် corrida အတွက်သီချင်းစာသားနှင့်အတူ (ထိုဘာသာပြန်ချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပါလျှင်မူရင်းဘာသာစကားမှကုစား) ။
ဘုရားသခငျ၏ဘုရားသခငျ့သိုးသငယ်, သူ၏ဘုရားသခငျ့ဒဿန; Silver, ဘုရားသခငျ့သိုးသငယ်တကောင်, နှိမျ့ခခြွငျးသိုးသငယ်ကို လုပ်. , လူ့အစွမ်းသတ္တိနှင့်မာနထောင်လွှားအပေါ်သညျဘုရားသခငျ၏ဘုရားသခငျ့သိုးသငယ်၏သစ်ကိုအောင်ပွဲ,._
အတွေးအခေါ်များ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; ထိုကုန်းနှင့်ကောငျးကငျကွန်မြူနစ်ဝါဒကွန်မြူနစ်ဝါဒအကြားဆက်ဆံရေးကို; ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိစ္စနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူမွေးဖွားလာရှိ၏ မဟာမိတ်ဖွဲ့အပေါင်းတို့အားဘုံရှိပါတယ်._
ဘုရားသခငျ့ပုံဥပမာ; telepathy နေထိုင်သောအားဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသော; မိဘကထုတ်ပေးဝါ; လှုပ်ရှားမှုအမှု၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သကဲ့သို့, ဒါဟာပထမဦးဆုံးအသီးအရွက်များအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာ; ပထမဦးဆုံးစက်ရုံဂျီသြမေတြီ._
ဘုရားသခငျ့ပုံဥပမာ; telepathy နေထိုင်သောအားဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသော; ဘုရားသခငျ့အဘအားဖွငျ့နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာဝါ; ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုမွကွေီးခံယူသောကနောက်ဆုံးအယူဝါဒ; အသစ်ကသိပ္ပံနှင့်ကမ္ဘာသစ်မွေးဖွားခဲ့ပြီး._
ကမ္ဘာမြေရဲ့နေရောင်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; နေရောင်ခြည်အလင်းအိမ်၏နိစ္စထာဝရဆက်ခံ; ဘုရားသခင်၏ဘုရားသခငျ့သိုးသငယ်, အ suns ရှေ့မှာရှိ၏ တစ်နေရောင်မြင့်တက်သကဲ့သို့, ဘဝါးသေဆုံးသကဲ့သို့, ဘဝါး၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း._
ဘုရားသခင့တိုးချဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်စကွဝဠာ, နေရောင်ခြည် chispita ချဲ့ထွင်; သူတို့က၎င်း၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အရည်များပြား; ဏုကမ္ဘာဖွားမြင်လျက်ရှိကြ၏ မွကွေီးပရဒိသုပျေါပေါကျ._
ကမ္ဘာမြေရဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စနစ်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; အရေအတွက် 318 အခြားဂြိုဟ်မဟာမိတ်ဖွဲ့အတွက်ကျယ်ပြန့်သည်, အထက်ပါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာကိုတန်းတူဖြစ်၏ သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြောင်းရင်းများထဲမှာ; Galactic အမိန့် World._
အရေအတွက် 318 ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; ကုန်းဖန်ဆင်းခြင်းအရေအတွက်; ပထမဦးဆုံးမော်လီကျူးကိုမွကွေီးသညျထသကဲ့သို့, အခြားမော်လီကျူး၏မြှောက်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး; အာကာသအတွင်းရင့်ကျက်ဂြိုလ်အဖြစ်._
ဘုရားသခင့ဖန်တီးသူအရေအတွက်; အကြီးဆုံးဖန်တီးမှုပေါက်ကွဲမှုအ alpha နဲ့အိုမီဂါဘဝါးအတွက်စတင်ခဲ့သည်; တစ်နံပါတ်ကလေးဘဝ; ဘုရားသခငျ့ခေရုဗိမ်၏ဘုရားသခင့ပဋိညာဉ်တရားကို; ပထမဦးဆုံးကလူ့စိတ်ဝိညာဉ်အားမွေးဖွားခဲ့ပြီး._
လူ့အသက်ကိုစနစ်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; ဘုရားသခင့စကားလုံးအသားကိုဖြစ်လာ; ထိုကောငျးကငျသံလိုက်အသစ်တစ်ခု Galactic မိသားစုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်သည်; ကောငျးကငျနိုငျငံတျောမှကွှလာကြောင်းဘုရားသခငျ့အမွေအနှစ်._
ကောငျးကငျ puntito ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; အချိန်နှင့်အာကာသဘုရားသခငျ့အစက်ဖြင့်တိုင်းတာကြသည်; လူ့အရေးယူမှုနှင့်ဘုရားသခငျ့ဆုချီးမြှင့်အကြားဆက်ဆံရေးကို; ဘုရားသခင့နေရောင်ခြည်လူနေမှုအကြေးခွံ; အရေအတွက် 318 နဲ့လူ့သီလ._
သံလိုက်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; နေရောင်ခြည်သည်သံလိုက်; ဝိညာဏသည်သံလိုက်; အသိဉာဏ်သည်သံလိုက်; ဘုရားသခငျ့ဘုရားသခငျ့ဝါအဘ၏မီးဘောလုံးကိုထဲကအသကျရှငျသံလိုက်; ကောငျးကငျသံလိုက်._
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအရေအတွက်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; မြေကြီးတပြင်ကိုဖန်တီးရန်, ဘုရားသင်္ချာတွက်ချက်မှုခဲ့သကဲ့သို့, Galactic အရေအတွက်; အသား၏ကမ္ဘာအကြားသူ၏ဘုရားသခငျ့ဝိညာဉ်ရေးရာအဆင့်ဆင့်._
ထာဝရဘုရားသခငျ့မူလအစ; အသီးအသီးက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကောငျးကငျဘုံဖြစ်၏ ဘုရားသခင့ Galactic အရေအတွက် 318 ဝဠာကိုချဲ့ထွင်ခြင်းအားဖြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဒဿနချဲ့ထွင်._
ဘုရားသခငျ့အစအဦးများနှင့်နေရောင်ခြည်စက်ဝိုင်းအိုမီဂါ၏အဆုံး, ဂြိုဟ်မြေ၏သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူနေနှင့်ဒဿန; ထိုထောင့် alpha နဲ့ဘုရားသခငျ့အမွေအနှစ်ဆိုက်; မွေးဖွားလာဂျီသြမေတြီ._
အသက်ရှင်သောသီလ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; လူ့ Pensares အကြားကိန်းဂဏန်းကြားဆက်ဆံရေး, အတွေးအခေါ်များအကြားမညီမျှမှု, တိုင်းလူ့လုပ်ဆောင်ချက် Galactic ဇာစ်မြစ်._
7 ဖျံ၏ဘုရားသခငျ့အဓိပ်ပာယျ; ကောင်းကင်ကြိမ်မှကိုက်ညီသောဘုရားသခငျ့ဗျာဒိတ်; တစ်ဦးဘုရားသခငျ့လမ်းဘုရားသခငျ့ဝါအဘ၏ဘုရားသခင့အခမဲ့အလိုတော်; ဘုရားသခင့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကထွက်._
ထောင်စုနှစ်ဘုရားသခငျ့ငြ​​ိမ်းချမ်းရေးအလံ; ၎င်း၏အဆင်းအရောင်နှင့်သင်္ကေတများနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Trinity ပါ၏ ဒီဘုရားသခငျ့သင်္ကေတဂြိုဟ်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်အကြာရှည်လိမ့်မည်; လာမှရုပ်ဝါဒ၏ကျဆုံးခြင်း._
ဘုရားသခငျ့ဝါအဘ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; သူ၏ဘုရားသခငျ့နှင့်ထာဝရဖန်ဆင်းခြင်း; Ball ကို debugger ဘုရားသခငျ့မီး; ခမညျးတျောဘုရားသခငျ့နှင့်နံပါတ်များအားထာဝရဆက်ခံ; 318 ဘုရားသခငျ့တရားမြှတမှုအရေအတွက်._
နံပါတ်ဘုရားသခငျ့စိတ်ပညာ; နေရောင်ခြည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတြိဂံ; ဇာတိပကတိအမွေအနတ်မင်းကြီးဂျီသြမေတြီသည် ဖြစ်. , ကိစ္စဝိညာဉျတဝတည်းဖြစ်ကြ၏._
လူ့တာဖြစ်ပြီးအတွက်ဘုရားသခငျ့စာရငျး; စိတျဓာတျနဲ့အမှုပြည်ထောင်စု; ဝေးသော suns တွင်မွေးဖွားစိတျဓာတျသကဲ့သို့, အ microcosm ဖို့ macrocosm ဖန်တီး; အရေအတွက်-စိတ်ဝိညာဉ်အား._
စကြဝဠာထဲမှာပထမဦးဆုံးtriceptación၏ဘုရားသခင့မူလအစ; ကြော်ငြာ infinitum ထပ်ခါတလဲလဲသောနိယာမ; alpha နှင့်တိုင်းလူ့သင်္ချာနိယာမမွေးဖွားခဲ့ပြီးအိုမီဂါဘဝါး, သင်္ချာ၏သီလ._
လူ့ဆဲလ်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; အာဒံနဲ့ဧဝကိုသူတို့ရဲ့အသားကိုချဲ့ထွင် pores; လူ့ပိုးလောင်းအရွ့အတွက်များပြားစေသကဲ့သို့, အဆုံးမဲ့အနာဂတ်လောင်းနေထိုင်သောမျိုးစိတ်များပေါ် လာ. , ပထမဦးဆုံးရှစ်တုန်ခါမှုများ._
နေရောင် trill alpha နဂါးငွေ့တန်းထံမှဘုရားသခငျ့အဘအားဖွငျ့နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာအကြီးဆုံးသားဝါ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; သူ၏ဘုရားသခငျ့နေရောင်ခြည်မိခင်အိုမီဂါ; အရေအတွက် 318 နှင့်နေရောင်ခြည် Trinity._
သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ; အားလုံးသမ္မာတရားကိုဘုရားသခငျ့တိုးချဲ့နိယာမ; ပထမဦးဆုံးကလူ့ဖြစ်လျက်ရှိဖန်တီးခဲ့သကဲ့သို့, ပထမဦးဆုံးစုံတွဲ, ကောင်းကင်တမန်တို့အာဒံနဲ့ဧဝရဲ့ကျဆုံးခြင်းángel.-ပထမဦးဆုံးစံပြ; microscopic ပရဒိသု._
သန့်ရှင်းသောကျမ်းဘုရားသခငျ့မူလအစ; သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်း၏အရအေတှကျ; ဘုရားသခင့အမွေအနှစ်ဘုရားသခငျရဲ့အစီအစဉ်; alpha နဲ့အိုမီဂါနေရောင်နေရောင်; နေရောင်ခြည်စတုရန်း; ဘုရားသခင့စိတ်ပညာ._
အချိန်ကာလ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; ကိစ္စနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးကို; ကောငျးကငျပစ္စည်းကိုအချိန်နှင့်အဆုံးအချိန်နှင့်အတူရင့်ကျက်ဂြိုလ်; ပထမဦးဆုံးအချိန်, ဒုတိယအကြိမ်, အားလုံးအချိန်အဘအဘနဲ့ပြန်အရွက်._
မြေကြီးပေါ်မှာကြီးပြင်းသောပထမဦးဆုံးမြက်ဘုရားသခငျ့မူလအစ; နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးမြေယာ၏သဘောသဘာဝအတွက်၎င်း၏လူ့ဇာတိချဲ့ထွင်သကဲ့သို့, ထိုစားကျက်မြေပေါ်တွင်အရေအတွက် 318._
ကမ္ဘာမြေရဲ့နေရောင်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; က Galaxy ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, အသကျရှငျသညျဘုရားသခငျမဟာမိတ်ဖွဲ့; အရေအတွက် 318 ဖွားမြင်လျက်ရှိ၏ ဘုရားသခငျ့ခေရုဗိမ်၏ဘုရားသခင့နိယာမ wavelike; ဘုရားသခင့ခေရုဗိမ်အဘယ်သူနည်း._
ကုန်းဂဏန်းဂျီသြမေတြီ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; ပထမဦးဆုံးအရေအတွက်မွေးဖွားခဲ့ပြီး, ပထမဦးဆုံးဖြစ်လျက်ရှိစဉ်းစား; ပထမဦးဆုံးမော်လီကျူး; ပထမဦးဆုံးမွကွေီးစုံတွဲ; အဘယျသို့သူတို့ရှေ့မှာ လာ. , အ triune က Galaxy._
စကြဝဠာtriceptaciónဘုရားသခငျ့တိုးချဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်; ဘုရားသခင်၏ဘုရားသခငျ့သိုးသငယ်ကရှင်းပြသည်; ကမ္ဘာနေထိုင်သော Galactic မိသားစုများ, အ triune နဂါးငွေ့တန်း; အသက်ရှင်သောဇာတိပကတိ၏ဘဝ._
သန့်ရှင်းသောဘုရားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏ဘုရားသခင့နိယာမ; အအဆုံးမဲ့ဝဠာကိုမှပေါ်ထွက်လာသောတဲ့ဘုရားသခငျ့ပုံပြင်; တစ်ကမ္ဘာနှင့်၎င်း၏အီဗိုလူးရှင်း, ဒီဘုရားသခငျ့သမိုင်းတစ်ဏုတစိတ်တပိုင်းဖြစ်၏ နိစ္စထာဝရအဆုံးမဲ့ချဲ့ထွင်သမိုင်း._
နံပါတ်ဘုရားသခငျ့မူလအစ; ပထမဦးဆုံးအရေအတွက်; ထိုတိုးချဲ့လူနေမှုဝဠာတှငျနံပါတ်များအားထာဝရဆက်ခံ; ဂဏန်း၏ဘုရားသခငျ့အီဗိုလူးရှင်း, ကောင်းကင်နံပါတ်များကိုအဘယျသို့ခဲ့ကြ._
ကမ္ဘာမြေရဲ့နေရောင်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; နေရောင်ခြည်လငျးအိမျမှေးဖှားခဲ့သကဲ့သို့သော; ဘဝါးနေထိုင်သောသံလိုက်၏တျကူးဉာဏျသတင်းရပ်ကွက်များဟူမူကား, တစ်ဦးဝင်စားကိုတိုးချဲ့သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းမှကြွလာအဖြစ်._
ထိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; အဆုံးမဲ့နေရောင်ခြည် chispitas မွေးဖွားခဲ့ပြီး, alpha အိုမီဂါ suns နှင့်နဂါးငွေ့တန်းဇာတိပကတိ၏အ Galactic မိဘများကမ္ဘာ; ကမ္ဘာ့အောင်မြင်သကဲ့သို့, ကမ္ဘာမြေရဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စနစ်, အလွန်ဝေးလံသောကာလ၌ဘာတစ်ဆိုငျရာအစအနရှိရှိဖြစ်ပါသည်._
လူ့ဇာတိပကတိ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပိုး; shaped ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုနှုန်း; သူတို့ကအမဲသားကိုရှေ့တော်၌ လာ. , ဘုရားသခင့မဟာမိတ်ဖွဲ့သံလိုက်နေထိုင်သောဖြာ; ဖွားမြင် alpha နဲ့အိုမီဂါဝိညာဉျ._
ထိုကုန်းသဘာဝဒြပ်စင်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; သံလိုက်နောက်ကွယ်မှယျ; ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုမွကွေီးဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွဝေးသောကြောင့်နေထိုင်သောအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်း; 318 ဘုရားသခငျ့မွငျ့မွတျခေရုဗိမ်မဟာမိတ်ဖွဲ့._
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအကြေးခွံ၏ဘုရားသခငျ့မွငျ့မွတျမူလအစ; လူ့အတွေး၏အစအဦးဖြစ်သကဲ့သို့, မိမိသွားရာလမ်းများ၏အကြောင်းရင်း; အနာဂတျတှငျဒါကြောင့်အလိုတော်._
ကိစ္စ, စိတ်ဝိညာဉ်အကြားပြည်ထောင်စု၏ဘုရားသခင့နိယာမ; ဂျီဩမေတြီ-linear ချဲ့ထွင်; ထိုမမြင်ရတဲ့မြင်နိုင်ဖြစ်လာသည်; အဏုအလွန်ကြီးမားသောဖြစ်၏ အအလွန်ကြီးမားသောအဏုဖြစ်ပါသည်._
လူ့အရေအတွက်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; သင်္ချာဝိညာဉ်တော်သည်ဖြစ်၏ ထိုကိန်းဂဏန်းစိတ်ကူးတွေဖွဲ့စည်းသောရလဒ်, အနာဂတ် Universal ကိန်းဂဏန်း; အရေအတွက် 318 နှင့်ဘုရားသခငျ့တရားမျှတမှုကို._
လူ့တရားမျှတမှုဘုရားသခငျ့မူလအစ; အတိတ်၏အမှားများ; ဆုပေးပွဲပြည်, သူတို့ကတိထားတော်နှင့်ပျက်ကွက်နှိမျ့ခခြွငျး၏ချိုးဖောက်ဆန့်ကျင်ဘုရားသခငျ့စှပျစှဲ._
သမ္မာကျမ်း၏ဘုရားသခင့မူလအစ; ကောင်းကင်လုပ်ပိုင်ခွင့်၏အချက်စတင်ပြီး; ဘုရားသခင့ကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. နှင့်လူ့မျှော်လင့်ချက်, အသီးအသီးစိတ်ဝိညာဉ်၏ဘုရားသခင့အရေအတွက်._
ထိုမော်လီကျူး၏ဘုရားသခင့မူလအစ; စကြဝဠာကိုချဲ့ထွင်စဉ်းစား၏အသကျရှငျကိစ္စ, အရေအတွက်နှင့်မော်လီကျူး; နေရောင်ခြည် Trinity စိတ်ကူးအရာအားလုံး၌ရှိ၏ လူ့အသက်တာ၌အရေအတွက် 318._
ဘုရားသခင့လှံတံ; အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော; ကောငျးကငျနိုငျငံတျော၌အကတိထားတော်ဘုရားသခငျ့တရားမြှတမှုနိယာမ, ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စိတျနှလုံးအနှိမ့်ချပါ၏ အသကျရှငျနှိမျ့ခခြွငျး._
လှံတံ၏ဘုရားသခငျ့မွငျ့မွတျမူလအစ; ရုပ်ဝါဒ၏ကျဆုံးခြင်း; မြေကြီးသားမိစ္ဆာသမိုင်း drop; အရေအတွက် 318; လူသားထုအတွက်အားလုံးတရားမျှတမှုအရေအတွက်._
ငွေဖလားတို့ကိုဘုရားသခငျ့မူလအစ; ဧရာသင်္ဘောများဧရာကမ္ဘာနောက်ကွယ်မှပေါ်ထွက်လာ; ကိစ္စ, စိတ်ဝိညာဉ်၏ဌာနခွဲ, သူတို့ရဲ့အခမဲ့မည်ဟုအဆုံးမဲ့ပုံစံများအတွက်ခံပြီးနေကြတယ်._
ဘုရားသခင့လှံတံ; ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်မြေတပြင်သညျကောငျးကငျတရားမျှတမှုအသိပညာ; သငျသညျကောငျးကငျနိုငျငံတျောလာသို့မဟုတ်မလျှင်အသီးအသီး, ကိုယ်အဘို့မြင်; တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ဘုရားသခင့အရေအတွက် 318._
ပျံသန်းပန်းကန်ပြားပျံ; ဆောက်လုပ်ရေး; ကိစ္စ-မီး; တစ်ဦးပန်းကန်ပြားပျံ၏အချက်စတင်ပြီး; ထိုမော်လီကျူးနေရောင်ခြည်မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်; သောကငွေကိုသင်္ဘောတစ်စင်းရှိတယ်._
ဘုရားသခင့လှံတံ; တရားမျှတမှု၏နိယာမဝဠာအားလုံးအတူတူပင်ဒြပ်စင်သည် ဖြစ်. , alpha နဲ့အိုမီဂါအစအဦးများနှင့်အသက်တာ၏အမိန့်၏အဆုံး, တရားမျှတမှုကိုပစ္စုပ္ပန်ဘဝရှေ့မှာရှိ၏._
ပျံသန်းပန်းကန်ပြားပျံ; ၎င်း၏ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, အထက်ပါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာကိုတန်းတူဖြစ်၏ ငွေသံလိုက်-နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးသင်္ဘောများသင်္ဘောများ ဖြစ်. , သူတို့၏အရေအတွက်တစ်ဦးသဲကန္တာရပါဝင်တဲ့သဲတူ၏._
ပျံသန်းပန်းကန်ပြားပျံ; ဒီကိစ္စကိုသိကျွမ်းရာအဆားတစ် attribute ကိုသည် ဖြစ်. , သင်္ဘောများ, ငွေကိုတည်ဆောက်နေကြတယ်ဘယ်မှာလာနောက်တဖန်မဖွားမြင်သောသူသည်._
ငွေဖလားတို့ကိုဘုရားသခငျ့မူလအစ; တွန်းအားစနစ်များ, အကြောင်းအရာကိစ္စအမြန်နှုန်းနှင့်မြန်နှုန်းဖြစ်၏ နေရောင်ခြည် Trinity ကဤသင်္ဘောများအတွက်ကမ္ဘာသို့သွားရောက်; သူ၏ဘုရားသခငျ့အပေါ်မှအောက်သို့ဆင်း; alpha နဲ့အိုမီဂါ._
ပျံသန်းပန်းကန်ပြားပျံတည်ဆောက်ခြင်း, ဘယ်လိုသူတို့ရဲ့မော်လီကျူးများပေါ် လာ. , နေရောင်ခြည်သင်္ချာ, နေရောင်ခြည်ဂျီဩမေတြီအမှတ်, အမည်မသိသံလိုက်; အရေအတွက် 318 လူနေမှုမွေးဘွား၏._
အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခငျ့နေရောင်ကိန်းဂဏန်းတွက်ချက်မှုပျံပန်းကန်ပြားပျံတည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏, ငွေအသတ္တုဖြစ်ပေါ်လာသကဲ့သို့, ဘဝါးသူတို့၏တစ်ဦးချင်းစီရုပ်လုံးပေါ်လာ._
ငွေကိုရေယာဉ်များတည်ဆောက်ခြင်း, နောက်ကျောရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့၏ Eternity ကွာဟတဲ့အသကျရှငျမူလအစ; လက်ရှိဘဝါးတော်ရှေ့မှာ; အဆုံးအစ alpha; နိယာမအိုမီဂါကစတင်ခဲ့သည်._
ငွေကိုသင်္ဘောဘုရားသခငျ့ကိန်းဂဏန်းတုန်ခါမှု, အရေအတွက်-မော်လီကျူး; အ suns ငွေရောင်သင်္ဘောများ rays; မြေကြီးတပြင်သွားရောက်ကြပြီသင်္ဘောများ, တရားစီရငျရာနေ့နီးလာ._
ငွေဖလားတို့ကိုဘုရားသခငျ့မူလအစ; ဝေးလံသော suns တည်ဆောက်သကဲ့သို့, မီးပေါ်မှာနေရောင်ခြည်စိတ်ကိုပြောင်းလဲ; လူနေမှုဘဝါးများ၏စက်ပြင်; alpha နဲ့အိုမီဂါ suns._
ကမ္ဘာမြေရဲ့ဂျီသြမေတြီ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မြေယာစီမံကိန်းခဲ့သကဲ့သို့, သငျသညျကောငျးကငျနိုငျငံတျော၌အကြီးမြတ်ဖြစ်သေးသေးလေးနှင့်နှိမ့်ချဖြစ်ရန်ရှိသည်._
အချိန်ရဲ့ဘုရားသခငျ့မူလအစ; လူ့စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူဘုရားသခငျ့ပဋိညာဉ်တရားကို; ကောငျးကငျအချိန်; မွကွေီးအချိန်; espirtual အချိန်; Galactic အချိန်; အလင်းအချိန်; မှောင်မိုက်အချိန်._
ထိုကုန်းနေကမ္ဘာကိုထာဝရအဘကူညီနေတဲ့စိတ်စွမ်းအင်သတင်းစကား; ဒုတိယသတင်းစကား; ပထမဦးဆုံးသတင်းစကားဘာသာရေးကိုကျောက်အားဖြင့်လောကဓာတ်မှ hidden ခဲ့သည်._
ပျံသန်းပန်းကန်ပြားပျံ; ငွေရောင်သတ္တု; မီးနေရောင်ခြည်ရှုထောင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း; ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ကြသည်သကဲ့သို့, သင်္ဘောများ alpha နဲ့အိုမီဂါ; တစ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်၏နိယာမ._
အာကာသ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; ကောငျးကငျနိုငျငံတျောထဲကဘုရားသခငျ့ပဋိညာဉ်တရားကို; အချိန်သတ္တဝါများနှင့်အတူစစ်ကြောစီရင်သဖြင့်, အားလုံးအထက်တပြင်လုံးကို._
မြေ၏ဝင်ရိုးစွန်းဝင်ရိုး၏သွေဖည်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; ချိန်ခွင်လုံးကိုဝိညာဉ်ရေးရာမရှိခြင်းဂြိုဟ်၏မော်လီကျူးကိုထိခိုက်; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance အတွက်အရေအတွက် 318._
အိုမီဂါစက်ဝိုင်းမူလအစ; လူ့အတွေး၏လိမ်; အ alpha နေရောင်တှငျမှေးဖှားနှင့် triune က Galaxy ၏နေရောင်အိုမီဂါသို့ကျယ်ပြန့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့နိယာမ._
90 °၏ညာဘက်ထောင့်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; လူ့စိတ်ဝိညာဉ်၏ပထမဦးဆုံးဂျီသြမေတြီ, alpha နှင့်လူ့ဖန်ဆင်းခြင်း၏အိုမီဂါဘဝါး, အ triune က Galaxy._
တစ်လောကလုံးသံလိုက်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; အဘ၏ထွက်ရှိသမျှကိုတန်ခိုးတော်အား; အ viviente.- 318 လိုင်းတွေ tricepta သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူနေရောင်ခြည်သည်သံလိုက်._
မဟာမိတ်ဖွဲ့နှင့်လူ့ဒဿနိကဗေဒနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးဘုရားသခငျ့သေတ္တာကို; တိုင်းသည်လူ့အတွေးအ macrocosm ဖန်ဆင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့၏ထုတ်ကုန်သည်._
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး; ကိုသာနှိမ့်ချသူတို့ဘက်၌တရားရရှိခဲ့သည်ပြီ ဘုရားသခငျသညျရဲ့ပညတျကုန်သွယ်ကြသည်မဟုတ်, ငယ်လေးကိုပထမဦးဆုံးခွင့်ရှိသည်._
လိမ်အသကျရှငျ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုစက်ဝိုင်းအိုမီဂါ; တစ်နေဖွားမြင်; လူ့စိတ်ဝိညာဉ်၏ 318 လိမ်._
မီးမွငျ့မွတျမူလအစ; အားလုံးအပူတစ်နေရောင်၏အသကျရှငျစကားရပ်ဖြစ်၏ ကောင်းကင်လုပ်ပိုင်ခွင့်နေရောင်ခြည်တိုးချဲ့မီးဖြစ်၏ 318 လိုင်းတွေ-မီး._
လူ့အတွေး၏ဘုရားသခင့မူလအစ; ဖျော်ဖြေတစ်ခုချင်းစီလုပ်ရပ်အတူတူကိုယ်ခန္ဓာ၌ရှိ၏ လုပ်ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာ; အသီးအသီးက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကောငျးကငျဘုံဖြစ်၏ 318 လိုင်း._
စိတျဓာတျတဲ့ကလေးပူးပေါင်းမည်သကဲ့သို့, ထိုမိခင်ကိုကြိုး; ခရီးသွားမှတ်တမ်းနှင့်အတွေ့အကြုံများဝိညာဉ်ကိုသူတို့ပစ္စည်းကိုဘဝကွိုးစားသှားဖို့ဆုံးဖြတ်သောအခါ._
ပျံသန်းပန်းကန်ပြားပျံ; ဒဿနကိစ္စရပ်များကိုလုပ်ပြီးလျှင်, ပစ္စည်းပစ္စယစဉ်းစားပြုသောအမှု, ထိုမော်လီကျူးစိတျဓာတျနှငျ့ပွောဆို._
ကောင်းကင်ဘုံ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; နိစ္စထာဝရကောငျးကငျဘုံsuceción; စကြဝဠာ၏ဂျီသြမေတြီ, မိုဃ်းကောင်းကင်ကဖွားမြင်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးသကဲ့သို့, macrocosm နှင့် microcosm; အ triune က Galaxy._
အမှုသညျဘုရားသခငျမူလအစ; ကိစ္စ, စိတ်ဝိညာဉ်တူညီတဲ့အရာဟူမူကား, ကောငျးကငျနိုငျငံတျောဟုချေါ, ဇာစ်မြစ်၏အချက်မှာဘယျအဖြစ်ပျက်._
မျိုးစိတ်ဘုရားသခငျ့မူလအစ; ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတစ်ဦးသည်နေရောင်၏ထုတ်ကုန်သည် ဖြစ်. , အသီးအသီးကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ဦးလညျပတျခဲ့သံလိုက်ဖြစ်၏ ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်._
စကြဝဠာခေရုဗိမ်၏ဘုရားသခငျ့မွငျ့မွတျမူလအစ; ကိစ္စ, စိတ်ဝိညာဉ်သည်အသက်ရှင်နှင့်ခေရုဗိမ်များကအုပ်ချုပ်ကြသည်._
ပစ္စည်းကမ္ဘာ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; မော်လီကျူးရာ၌အိုမီဂါစက်ဝိုင်း; မဟာမိတ်ဖွဲ့သေတ္တာကိစ္စနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်၌ရှိ၏._
ဝိညာဉ်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; သူတို့မွေးဖွားသူတို့သည်အသား၏ပထမဦးဆုံးကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းဘယ်လိုနေကြသကဲ့သို့, တူညီတဲ့ကြံစည်မှုအမှတ်မွေးဖွားသူများစိတျဓာတျအသား._
ဝါအဘ၏အသကျရှငျကမ္ဘာ၏တိုင်းသတ္တဝါ၏ဘုရားသခငျ့ဒဿန; ကောင်းကင်ဘဝကိုတောင်းဆိုမှုအသားကို လုပ်. , ဆင်းရဲသောသူကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြောင်း._
ပျံသန်းပန်းကန်ပြားပျံ၏ mechanics ရဲ့ဘုရားသခငျ့မူလအစ; နှင့်မော်လီကျူး၏အရေအတွက်ကိုတွက်ချက်; တြိဂံဖွဲ့အချက်များ._
ခေရုဗိမ်၏ဘုရားသခင့မူလအစ; စကြဝဠာကိုတိုးချဲ့တှေးအချေါ၏အနှစ်သာရကို; နဂါးငွေ့တန်းဖွားမြင်ကြသည်သကဲ့သို့, အ triune နဂါးငွေ့တန်း; သူ့ရဲ့အသိုက်._
ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်၏ဒေသနာ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; တစ်ဦးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမဟာမိတ်အဖွဲ့, output ကို alpha နဲ့အိုမီဂါဘဝါး, အကျင့်ပျက်ကမ္ဘာ၏ရုံးတင်စစ်ဆေး._
သင်္ချာ၏ဘုရားသခင့မူလအစ; အားလုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုကောငျးကငျနိုငျငံတျောအရွက်; ထိုတွက်ချက်မှုဒါကြောင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဖန်တီးခဲ့; စဉ်းစားမတွေးတော 318 လိုင်း._
အားလုံးလူ့ Pensares ၏ universal နိယာမ; 318 သီလတစ်ဦးမမြင်ရတဲ့စိတ်ကူးဖွဲ့စည်းရန်, alpha နဲ့အိုမီဂါ._
နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်း; မမှန်သောသက်သေကိုအသုံးပြု, မြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ဆိုတော်မူသောသူတို့က, ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်, အကြိနျအဘမဟုတ်ပါဘူး._
နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်း; ကမ္ဘာ၏ကြွယ်ဝသောလူအမျိုးမျိုး; သငျသညျ, explotásteisကဲ့သို့တူညီသောသင်၏ဥစ္စာတဝက်ပေးရမည်; သငျသညျmedísteisတိုင်းတာလိမ့်မည်သောဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ._
နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်း; မြင်မယုံသောသူတို့က, ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်, သူတို့ထဲမှာမထီမဲ့မြင်ပြုလေပြီပထမဦးဆုံး; သူတို့ကအခြားကမ္ဘာထဲမှာလျစ်လျူရှုခံရလိမျ့မညျ; အထင်ယောင်ထင်မှား._
နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်း; အညီlesfuéလုပ်မလုပ်ဘူးသောသူတို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်နိုင်မှာထားတော်မူ; သာအလုပျသမား, ဆင်းရဲကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်ကြ၏, နိုင်ငံတော်သို့ဝင်._
ဘုရားသခငျ့တရားသဖြင့်စီရင်; usurers နှင့်ဆိုးသောအားဖြင့်အစားအစာ hoarded သောသူ, ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်, သူတို့သည်လည်းအခြားတည်ရှိမှုအတွက်သိမ်းသွားလိမ့်မည်._
နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်း; အနိုင်ရသောသူတို့က, နှိမ့်ချ, အလွလစာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်နိုင်လိမ့်မည်ထက် သာ. ကြီးမြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့; ရွှေအခမညျးတျော၏နိုငျငံတျောမှဦးဆောင်လမ်းပြမပါဘူး._
နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်း; သူတို့သည်အလွန်ခံစားခဲ့ရပါ၏ အော်ပရေတာလွန်; ခွဲဝေအုပ်ချုပ်သောသူမရှိ, ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်; သာစာတန်ကိုယ်တော်တိုင်ပိုင်းခြား._
လူ့အသက်ကို၏ဘုရားသခင့မူလအစ; alpha အိုမီဂါအစနှင့်အဆုံး, လူ့အတွေးအခေါ်များ၏အဆုံး, ရွှေကျဆုံးခြင်းနန်းစံ; အသူကပြောတယ် osiris ၏မင်းဆက်၏အဆုံး._
တစ်ဦးဝင်စားကောငျးကငျနိုငျငံတျော၌အရာအရပ်ကိုကြာသကဲ့သို့, အ macrocosm ကြောင့်လူ့သတ္တဝါမှလာရာအရပ်ဖြစ်၏ 318 သံလိုက် Saturation._
အချိန်ရဲ့အဆုံး, အချိန်စမ်းသပ်ပစ္စည်းကိုလူ့အသက်ကို; ဒါဟာအဘယ်သူ၏ယူနစ်အသစ်အသိပညာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အချိန်လာ, အချိန်နှင့်အတွေးအခေါ်များတူညီတဲ့အရာဟူမူကား, trill အချိန်._